Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Indawo yeendwendwe » Ungacwangcisa njani kwaye uvavanye njani iGear yokuzingela kwakho ngasemva?
Abantu abazingelayo bahlala beyazi indlela enokuba yingozi ngayo, nangona kunjalo, ukuzingela ezintabeni kude nesihlwele kunokuba nesibindi ngakumbi. Ukuzingela ngasemva kufuna amandla amaninzi kunye nomonde ukuze ubambe umdlalo wamaphupha akho. Ukongeza, ikwafuna umzingeli athathe isigqibo sokuba afuna na ubhaka, ahambe nemeyile okanye ihashe okanye asuse inkampu yakhe ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Nangona yonke into inokuvakala isoyikisa, inokukunika amava amaninzi ongawalibalekiyo kunye neenkumbulo onokuthi uzixabise. Ngoko ke, esi sikhokelo sibanzi iya kukuchazela indlela yokucwangcisa kunye nokuvavanya izixhobo zakho zokuzingela zasemva. Qhubeka ufunda!
Ukucwangcisa iGear yakho yokuzingela yaseBackcountry
Unokuba uziva uxinezelekile ngoku kwaye unokucinga ukuba kufuneka ufumane yonke into kunye nawe ezintabeni. Akunjalo ngokwenene. Kukho izinto ezimbalwa ezibalulekileyo ukwenza uhambo lwakho lube yimpumelelo. Qaphela ezi zixhobo zilandelayo ezifunekayo:
Xa usiya kuzingela umva, ubhaka wakho uya kuba ngumhlobo wakho osenyongweni kodwa inokuba yinto echaseneyo ukuba awukukhetheli echanekileyo. Kufuneka uthenge i-backpack super lightweight ukukhusela ubunzima emqolo okanye emagxeni akho.
Okukhona bekhaphukhaphu oobhaka, kokukhona bebiza kakhulu. Kodwa ukuba ucinga ngayo njengotyalo-mali lwexesha elinye, iya kuyixabisa imali. Kuya kufuneka uqiniseke ukuba inokuthwala zonke izinto zakho ngokulula, ke ngoko, kufuneka uqinisekise umthamo wayo phambi kokuthenga.
Kulungile ukufumana ubhaka onamacandelo amaninzi kunye neziphu ukuqinisekisa ukuba unokukhupha nayiphi na into oyifunayo ngokulula nangokukhawuleza ngelixa uzingela.
Ubushushu bemini nasebusuku bunokwahluka ezintabeni kwaye kufuneka upakishe iimpahla zakho ngokufanelekileyo. Kukwangcono ukujonga imozulu yendawo oya kuyo njengoko iya kukunceda ucwangcise ngobulumko.
Ngokuqhelekileyo, kufuneka ukhumbule ukuba iimpahla zakho akufanele zenziwe ngomqhaphu, njengoko zifunxa ukubila kunye nokufuma. Njengoko uya kubila kakhulu ngelixa unyuka intaba, kungcono ufumane ipolyester okanye naliphi na ilaphu elineempawu zokufuma.
Kuya kufuneka ugcine iileya ezongezelelweyo zempahla kunye nawe njengoko inokuba neqhwa ebusuku. Kwizihlangu, kufuneka utyale imali kwiibhutsi ezomeleleyo kodwa zikhululekile kwaye zikhaphukhaphu, njengoko ungafuni amadyungudyungu ezinyaweni zakho ukusuka kwiimayile zokuhamba kwindawo engalinganiyo.
Kwakhona, isihlangu esinjalo sinokukubiza ngaphezulu kweedola ezingama-200, kodwa siya kuxabisa. Kufuneka uziphephe iibhokisi zeenzwane ezincancisayo njengoko ziya kuthintela ukuhamba kwegazi.
Indawo yakho yokulala kufuneka ikhululeke kangangoko ukuze uhlaziye umzimba wakho kwaye ukwazi ukuzingela iiyure ngolunye usuku kwiimeko ezinzima.
Xa uza kucwangcisa ukuthenga isikhwama sokulala, kufuneka kwakhona uqwalasele izinto eziza kwenziwa, njengoko kufuneka zikwazi ukumelana nommandla onqabileyo weentaba.
Ukongeza koku, kungcono ukufumana ibhegi egxotha amanzi ene-premium lightweight pad ukuze ufumane intuthuzelo enkulu kunye nobomi obude.
Xa uzingela kwii-Rocky Mountains, ngokuqinisekileyo awufuni ukunyuka ezinye iiyure ezimbini ngokusekelwe "uqikelelo" lwakho olubi ukuba ubone i-elk enkulu. Yiyo loo nto kufuneka ucwangcise ii-optics zakho kunye nokuzingela umva.
Kuya kufuneka ngokuqinisekileyo utyale imali kwi-binoculars ezikumgangatho ophezulu, njengoko ziya kukuvumela ukuba ubone kufutshane ngaphandle kokuchitha ixesha kunye nomzamo wakho. Kunye noku, ukutyala imali kwi- rangefinder kunokukunceda ukubala umgama, ukuze ukwazi ukucwangcisa uhambo lwakho ngokufanelekileyo.
Zombini ezi zinto aziyi kuthatha indawo enkulu ebhegini yakho, kwaye azinzima kakhulu. Nangona kunjalo, ukuba ucinga ukuthatha umda kunye nawe kuyimfuneko, kufuneka uhlale ukhumbula ukuba kunokuba nzima kakhulu. Ngoko ke, ukuba uhamba ngeqela okanye neqabane lokuzingela, ukwabelana ngayo kuya kuba yinto elula ngakumbi.
Ukuvavanya iGear yakho yokuzingela yaseBackcountry
Kukho amava amaninzi kunye nabazingeli xa befumana zonke izixhobo zodidi lokuqala kwi-adventure yabo enkulu kwaye bagqibe ngezixhobo ezaphukileyo ngelixa bezingela. Isenokuba ngamava angathandekiyo, ke ngoko, kufuneka uvavanye zonke izixhobo zakho ngokufanelekileyo phambi kokuba uye kuzingela.
Kufuneka ujonge ukuba ibhetri yesibane sakho sifuna ukutshintshwa okanye iGPS yakho isebenza kakuhle. Kuya kufuneka kwakhona uvavanye ubhaka wakho kwaye uvavanye ukuba uhambelana nayo yonke into ngendlela eyiyo, kwaye uyakwazi ukuthwala ubunzima ngokukhululeka. Ngokufanayo, kuya kufuneka uhlole ngokucokisekileyo nezinye izixhobo zakho.
Ngaphaya koko, kuya kufuneka uqinisekise ukuba intente yakho yokumisa inkampu ikwimeko efanelekileyo, kwaye ungayivavanya ngokuyimisa kwiyadi yakho yangasemva okanye uhambe uhambo olufutshane lwenkampu ngempelaveki nabahlobo bakho. Oku kuya kukuvumela ukuba ujonge ukuba ifuna ukutshintshwa okanye ukulungiswa, kunokonakalisa uhambo lwakho lokuzingela lokubuyela emva.
Nimrah Shiekh uthi:
NgoJanuwari 15, 2022 kwi-19: 55
Enkosi kunye neminqweno